१५ बैंकको लाभांशमा कसले कति प्रस्ताव गरे, बाँकी बैंकको कति आउँला ? - Birgunj Sanjal१५ बैंकको लाभांशमा कसले कति प्रस्ताव गरे, बाँकी बैंकको कति आउँला ? - Birgunj Sanjal१५ बैंकको लाभांशमा कसले कति प्रस्ताव गरे, बाँकी बैंकको कति आउँला ? - Birgunj Sanjal
१५ बैंकको लाभांशमा कसले कति प्रस्ताव गरे, बाँकी बैंकको कति आउँला ?
२० कार्तिक २०७८, शनिबार १९:१५
वीरगन्ज । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मुनाफाबाट १५ वाणिज्य बैंकहरूले बोनस शेयर र नगद लाभांश घोषणा गरेका छन् । सिभिल बैंक, कृषि विकास बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्राइम बैंक, एनसिसी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभुु बैंक, एसबिआई बैंक, सनाइज बैंक, मेगा बैंक सेन्चुरी बैंकले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ । कोभिड संक्रमणसँगै लकडाउन भएपछि गतवर्षबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गरेपछि यसवर्ष बोनस शेयरको अनुपात सबै बैंकले बढाएका छन । त्यही भएर लाभांश दिने बैंकहरुले बोनस सेयरलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।
हालसम्म नबिल बैंक र हिमालयन बैंकले सर्वाधिक बोनस तथा नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छन । नविल बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जको तयारीमा रहेको हिमालयन बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । नबिल बैंकले ४ दशमलव चार प्रतिशत नगद र ३३ दशमलव ६ प्रतिशत बोनस गरी कुल ३८ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि ३५ दशमलव २६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो ।
त्यसैगरी, हिमालयन बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमध्ये २१ दशमलव ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ दशमलव ६४ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । कुमारी बैंकले सबैभन्दा कम लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ६ प्रतिशत बोनस र २ दशमलव ६७ प्रतिशत नगद गरी जम्मा ८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सानिमा बैंकले कुल १७ दशमलव ८९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । जसमा १७ प्रतिशत बोनस सेयर र शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ  । त्यस्तै, सिटिजन बैंकले १२ दशमलव ९१ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ९ प्रतिशत नगद गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । हिमालयन बैंकसँग मर्जको तयारीमा रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १२ दशमलव ६१ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ३९ प्रतिशत नगद गरी कुल १६ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।
एनआइसी एसिया बैंकले कुल १५ दशमलव ७९ प्रतिशत लाभां १५ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले नगद लाभांशमा ३ दशमलव ५० प्रतिशत र बोनस शेयर १२ प्रतिशत गरी कुल १५ दशमलव ५० प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तै, एनएमबि बैंकले १२ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ५ प्रतिशत नदग गरी कुल १५ दशमलव ८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । सिद्धार्थ बैंकको १४ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस र शूून्य दशमलव ७५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । नेपाल बैंकले १४ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ प्रतिशत नगद गरी कुल १७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले कुल १३ दशमलव ५० प्रतिशतमा १० प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कुल १३ दशमलव ६ प्रतिशत लाभांशमा १० प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ६ प्रतिशत नगद लाभांश गरेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले ६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, कुमारी बैंकले हालसम्म घोषणा गरेकोमध्ये सबैभन्दा कम लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ६ प्रतिशत बोनस र २ दशमलव ६७ प्रतिशत नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।